Ihhotela le-Seabel Rym Beach 4 * (Tunis, Djerba): incazelo, izinsizakalo, ukubuyekezwa
I-Tunisia sekuyisikhathi eside ithanda abantu bakithi njengendawo yokuhamba olwandle. Kulesi sihloko, sifuna ukukhuluma ngezinye zehhotela lase-Djerba okuthiwa i-Seabel Rym Beach.
Okuncane mayelana nehhotela ...
I-Seabel Rym Beach iyinkimbinkimbi yezinkanyezi ezine eziqhele ngamakhilomitha angu-14.3 ukusuka enyakatho ye siqhingi. Ihhotela likhona ogwini olusenyakatho lwe-Djerba, amakhilomitha angu-15 ukusuka enhloko-dolobha yaseHoumt Souk kanye namakhilomitha angu-20 esuka esikhumulweni sezindiza. Eceleni kwehhotela yiyona indlu yokukhanya yaseTaguermess, kanti amakhilomitha amathathu yiyona engcono kakhulu yegalofu esiqhingini.
I-Seabel Rym Beach ibhajwe ngamatende esundu futhi iqukethe izakhiwo eziyisithupha. Ingqikithi, insimu yehhotela i-hektare ezingu-11. Inkimbinkimbi ihlose ukuphumula komndeni nokuvakasha abakhuthele, kodwa ukuphathwa kwehhotela kuyajabula kubo bonke ngaphandle kwezivakashi.
Ihotela livuliwe ngo-1990, ngoba lincane kakhulu. Ngo-2008, kwakhiwe kabusha kabusha. Futhi manje esinye sezikhungo ezinhle kakhulu esiqhingini saso sigaba.
I-Seabel Rym Beach inikeza izivakashi zayo amakamelo angu-354. Ihhotela liqukethe isakhiwo esisodwa, izivakashi zehhotela zingazikhethela eyodwa yezindlela ezimbili zokuhlala:
Igumbi eliphezulu (26 sq. M.).
I-Sea View Igumbi eliphezulu (31.8 sq. M.).
Amakamelo anendawo yokugezela, izinwele zezinwele, i-TV, i-hairdryer, i-satellite satellite, i-minibar futhi iphephile. Wonke amafulethi anombono we-panoramic olwandle. Ihotela linikeza isevisi yamakamelo amahora angu-24.
I-Seabel Rym Beach (i-Djerba) inikeza abathengi bayo ithuba lokuthola zonke izinzuzo ze-Ultra All Inclusive. Isikhungo esikhulu senkimbinkimbi siqala ukuthola izivakashi zokuqala ngo-6.30. Ukudla kwasekuseni kuqhubeka kuze kube ngu-10.00. Ngesikhathi esithile, ngokusho kwesimiso, indawo yokudlela ikhonza itiye ngamakhasi amasha. Isikhungo sinikeza izivakashi ibhuthethi. Izivakashi zehhotela zingahle zilandele iziphuzo ezilandelayo: ubhiya, isoda, amaminerali, iwayini (elibomvu, elibomvu). Kuzo izivakashi zayo, le ndawo yokudlela ihlela isihloko sobusuku kathathu ngesonto. Futhi izivakashi ezincane zingalalisa izitsha zemenyu yokudla.
I-Seabel Rym Beach (i-Djerba) nayo ine-café enesakhiwo sayo samaMoor, ibha elwandle - i-Waikiki, ibha yokubhula kanye ne-La Corrida bar. Isistimu "i-Ultra yonke into ehlanganisiwe" ithatha ukuhlinzekwa kwazo zonke iziphuzo ngokuphelele mahhala. Ezisezindaweni eziyinkimbinkimbi, izivakashi zingalawula utshwala bendawo, ama-juice, amasha, ushokoledi ashisayo, ubhiya, ubisi nama-herbal teas. Phakathi nosuku ungakwazi ukwanelisa ukulamba kwakho kuzo zonke izikhungo zehhotela.
Ihhotela laseSeabel Rym Beach linamanje ingqalasizinda enhle kakhulu. Kukhona konke okudingayo ngeholide elihle kakhulu. Ihhotela linomsebenzi wamahora angu-24 nokubhaliswa kwabavakashi. Abasebenzi benkimbinkimbi bakhuluma izilimi eziningi, ngaleyo ndlela bagweme isivinini selimi. Le nkimbinkimbi inomuntu wezinwele, isitolo, i-spa, i-washingroom, igumbi lokuhlangana, i-nightclub, yokupaka kanye negumbi lomhlangano.
I-Seabel Rym Beach 4 * (i-Djerba) inesihlabathi sayo esasenhlabathi, esinezinhlanzi zelanga nezimbulumu. Ibhishi linomnyango obumnene olwandle, elifanele ngisho nezingane ezincane. Ibhishi ligcinwa lihlanzekile, ngenxa yokuhlanza nsuku zonke abasebenzi basekhaya. Emanzini zivela ngezikhathi ezithile zasolwandle, iziphi izipikili ezisogwini. Abasebenzi behhotela bawaqoqa, bese ubathatha. Phakathi nosuku ogwini ungavakashela izifundo ze-bachata ne-latin. Ibhishi lingaphansi kokuvikelwa. I-animators iboleka izivakashi ngemidlalo yezemidlalo: i-volleyball, ama-darts.
Ihhotela le-Seabel Rym Beach linendawo yalo, ehlonywe ngamakamelo okuphulukisa, lapho ungakwazi ukuhamba khona, ukubhunga, umzimba wraps, ukwelapha ubuso. Phakathi nendawo kukhona i-jacuzzi, igumbi le-steam kanye ne-sauna. Njengokwelashwa, abavakashelayo bangathola ama-hydrotherapy sessions.
Kulabo baphathi bezokuvakasha abafana nemisebenzi yangaphandle futhi bahlela ukuvakashela indawo efana ne-Djerba Island, i-Seabel Rym Beach ingaba indawo enhle yokuchitha iholidi. Ukuphathwa kwalesi sikhungo kunakekela ukunakekelwa kwezivakashi, iqembu lezokuzijabulisa liyamenywa yiqembu lezithombe. Imisebenzi yezemidlalo ntambama iyatholakala izivakashi, futhi kusihlwa - izinhlelo zokubonisa ezikhangayo. Izivakashi ezincane zingavakashela i-mini-club kanye ne-mini-disco kusihlwa. Eduze ihhotela yilona lebhulagi elihle kunazo zonke e-Djerba. Ihotela linomkhumbi wokubhukuda wangaphakathi nangaphandle, okunye okufudumele emahoreni apholile.
Okuncane mayelana ne-resort ...
I-Midun ingenye yemizi emikhulu emibili esiqhingini. Itholakala ngaphandle kwendawo yezokuvakasha, ngenxa yokuthi iziphi izivakashi ezingakwazi ukuzwa ngokugcwele ukunambitheka kwase-oriental ezweni. Kukhona imikhosi, izimakethe ngisho neminyuziyamu yomlando.
Midun unomlando ocebile. Ezinsukwini zakudala, imakethe yezinceku ezinkulu yayisebenza edolobheni. Abanye babo basinda esiqhingini ngemva kokukhululeka. Ngakho-ke, kunabantu abaningi abamnyama lapha.
UMidun ubeyinsimu encane yokudoba, futhi eminyakeni engamashumi amabili edlule iye yaba isikhungo sezokuvakasha. Idolobha liyathakazelisa ngokukhethekile ezinsukwini zemakethe, kubonakala sengathi iphila ngaleso sikhathi. Abavakashi bafuna ukuzulazula ezungeze indawo yezitolo befuna izimpahla ezingavamile. Imakethe ihaqwe ngamathilomu nezindawo zokudlela, lapho ungazitholela khona ngemva kokuhamba. Abavakashi, njengombuso, babe nezitolo ezithengisa ezithakazelisayo ezengeziwe ngemikhumbuzo. Ukuhambahamba emakethe, kufanele kukhunjulwe ukuthi ungathenga izimpahla kuwo kuphela ngokuxoxisana. Zonke izintengo lapha zikhuphuke kakhulu, ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi uhlanganyele.
Izindawo ezithakazelisayo edolobheni
I-Midun iyimpofu ngokwezinto ezikhangayo, kodwa kunezinye izindawo ezingaba ezithakazelisayo kuzivakashi. Kanye ngesonto ngoLwesibili ekhanda elikhulu ungabuka umshado waseBerberian, umkhuba onjalo uveza ngokucacile amasiko wendawo.
Ukukhangwa okukhulu kwedolobha yi-mosque yeFadhlum, esendleleni eya enhloko-dolobha yaseHoumt Souk. Kuyathakazelisa ukuthi kungavakashelwa abamele kunoma iyiphi inkolo.
I-Seabel Rym Beach: ukubuyekezwa
Ukuqeda ingxoxo ngehhotela, ngifuna ukuxoxa ngezibuyekezo ngakho. Kungenzeka yini ukuncoma njengendawo yokuphumula lezo zivakashi ezihlela ukuvakashela iTunisia? I-Seabel Rym Beach, ngokusho kwezivakashi, ihotele enhle kakhulu yezinkanyezi ezine, eyenzelwe imindeni. Kuyinto ekhululekile ukuhlala kude nomuzi, ube ogwini. Ihotela alikho phakathi kwedolobha, ngakho akufanelekeli abalandeli bezinhlangano zasebusuku. Eduzane nenkimbinkimbi akukho ukuzijabulisa. Kodwa ungakwazi ukuhamba ogwini. Okunye okuyimfihlo kwehhotela kuhlawulelwa ngokugcwele ulwandle oluhle nolushushu, uhlobo olumangalisayo nesihlabathi esihle. Ihotela linelwandle layo, eliseduze eduze nesakhiwo. Insimu engasogwini igoqwe futhi iphinde ivikeleke njalo. Kodwa kusekhona abathengisi, nabalindi abacasulayo otgonyaet.
Ibhishi lehhotela lihlanzekile futhi ligcinwe kahle, lihlanzwa nsuku zonke. Indlela eya emanzini ilula futhi iyinde, ukuze ufike ekujuleni, udinga ukuhamba kahle. Mhlawumbe akubona bonke abantu abadala abayithandayo, kodwa kubantwana abanjengelwandle olunjalo kuhle kakhulu. Ngezinye izikhathi ogwini kukhona izinhlanzi zasolwandle, kodwa zihlanza ngokushesha abasebenzi basehhotela.
Izinkimbinkimbi zinekamelo elijwayelekile elinombono we-panoramic ogwini noma echibini. Amafulethi anemibhede emibili, kanti amatharasi anefenisha yepulasitiki. Ngokuvamile, amakamelo afana nesinkanyezi ezine-inkanyezi.
Amantombazane ahlanzekile ahlanza amafulethi nsuku zonke, futhi abuye enze ama-swans amathawula, bese afafaza imibhede ngama-rose petals. Amathawula emakamelweni ashintshwe nsuku zonke, futhi ogwini lukhishwa kuphela uma kukhona idiphozi, futhi ukushintshwa kwabo kuwufanele imali. Ngakho-ke, kunengqondo ukuya eholidini nezesekeli zabo ogwini.
Ngifuna ukusho amazwi ambalwa mayelana nokudla, okufanelekele yonke indumiso. Izivakashi zihlala zijabule kakhulu nazo, zikhomba ukunambitheka okuhlukahlukene nokuhle kakhulu kwezitsha. Umpheki wendawo uhlela ubusuku obukhulu izikhathi eziningi ngesonto. Nsuku zonke ukuze kudle ukudla ematafuleni kubonakala izinhlanzi zasolwandle (amaqabunga, izinkukhu, izinhlanzi, ama-shrimps). Kabili ngosuku, izivakashi zingajabulela i-ayisikhilimu ngobuningi obungenamkhawulo. Kuningi okwanele ematafuleni nasezithelo. Nsuku zonke kukhona inyoni, inhlanzi, inyama enkundleni ye-buffet. Ukudla kunikelwa ngobuningi obanele. Izindleko zeziphuzo zifakiwe ku-All Inclusive, ngakho-ke zingathathwa kunoma yiliphi inani. Abalindi esitolo sokudlela abahlali bebhekene nomsebenzi njalo, kodwa bazama kanzima futhi ngesikhathi esifanayo bamukele izivakashi njalo.
Ukubuka okujwayelekile kwehhotela
Ihhotela linikeza izivakashi zayo idizi elikhulu elihlanzekile labantu abadala, kanye nedamu labantwana. Ekuseni, izisebenzi zehhotela zihlanza ama-reservoirs, noma kunjalo, azikho abakhiqizi bamaholide abaningi abazungezile, njengoba kunolwandle olunhle kangaka eduze. Ihotele ine-spa yayo, kodwa izinsizakalo zayo kufanele zikhokhwe ngokwehlukana, azifakwanga emanani.
Le nkimbinkimbi ihlale inomhlahlandlela wendawo, inikeza izinyawo eziningi ezungeze lesi siqhingi. Abamele izinkampani ezokuvakasha ogwini banikeza izinkambo ezifanayo zokuvakasha. Ungasebenzisa amasevisi awo, noma kunjalo, kulula ukuhamba uhambo oluya eMidoun noma eHoumt Souk ngokuthutha umphakathi. Uhambo olunjalo luyoba eshibhile kakhulu. Isibonelo, ukuvakashela ipulazi epulazini ngokuzimela ngokuphindaphindiwe kabili kunokuba neqembu lokuvakasha.
Abavakashi abawaziyo bayeluleka ukuba bahambe eHoumt Souk, Midun, epulazini lezingwenya, bahlele ukuhamba izingane emkhunjini wepirate. Phakathi nosuku, ihotela lisebenzisa ama-animators, lihlela imicimbi yezemidlalo nobusuku bendaba. Ithimba lisebenza kahle, kodwa zonke izinhlelo zenziwa kuphela yimizamo yalabafana. Ihotela ayisebenzi ukwenza ukuvakashela abaculi nabadansi.
Le nkimbinkimbi inendawo enhle kakhulu enhle enemibala ehlukene nemithi yesundu. Ebusuku kuyamnandi ukuhamba nxazonke, ujabulele ubuhle bezindlela.
Esikhundleni segama elilandelayo
Ukubamba iqhaza, ungancoma ngokuphephile ihhotela njengendawo yeholide elihle kakhulu lesabelomali kulezi zivakashi ezifuna ukuphumula ngokuzithoba ebhishi futhi ungafuni amaqembu asebenzayo nokuzijabulisa ebusuku.
Ihhotela Novostar Khayam Garden Beach & Spa 4 * (Nabeul, Tunisia) izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Majorda Beach Resort Indawo abantu 5, India, Goa izithombe kanye nokubuyekeza
Ukuhlela izindleko zokukhiqiza - i iqhinga ezibalulekile kwezomnotho ukuze anciphise inani lokugcina
I-beet lapho ukubaluleka caloric liphansi, kanye namakhophi high umsoco - omunye imifino ziwusizo ikakhulu
Kuyini ERP-yesistimu? Ukuhlela nezimali ezinkulu ibhizinisi